600 1 000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 watt Pure Manual Sine Wave inverter Ishaja Umnikazi sika - Sigineer Power
Home / Blog / 600 1 000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 watt Pure Manual Sine Wave inverter Ishaja Umnikazi sika
I-Shenzhen Sigineer Power CO., LTD.
I-TEL: +86 755 2160 7078
I-FAX: +86 755 6165 8278
Engeza: iBld A, Jiali Industrial Zone, Yuanfen Rd, Longhua, Shenzhen, 518100, eChina
1. Ulwazi olubalulekile lokuphepha
Londoloza Leli Bhukwana! Funda le ncwadi ngaphambi kokufakwa, iqukethe ukuphepha okubalulekile, Ukufakwa Kanye nemiyalelo yokusebenza. Yigcine endaweni ephephile ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo.
Yonke i-wiring kumele ilandele i-National Electric Code, Provincial or other codes Empeleni ngesikhathi sokufakwa, ngaphandle kokusikisela kulokhu Incwadi. Zonke izintambo kufanele zibe ngabaqhubi bezethusi.
1. 1 Ukuphepha Okujwayelekile Ukuphepha
1. 1. 1 Ungavumeli i-Inverter ukuba imvula, iqhwa, i-spray, ibheji noma uthuli. Ukuze unciphise ingozi yengozi, ungafihli noma ungavimbela ukuphuza umoya Ukuvula. Ungafaki i-Inverter ngokuzulazula Ikamelo. Ukushisa ngokweqile kungaholela. Vumela okungenani i-30CM yokuvumelanisa eduze kwe-inverter yokugeleza komoya. Qinisekisa ukuthi umoya ungasakaza ngokukhululekile nxazonke. Kudingeka ukuhamba okungenani kwe-145CFM.
1. 1. 2 Ukugwema ingozi yomlilo nokushaqeka kwe-elektroniki, qiniseka ukuthi kukhona I-wiring isesimweni esihle kagesi nokuthi ucingo alukho Ngaphansi. Ungasebenzisi i-Inverter nge-wiring ewonakele noma engaphansi.
1.1. 3 Lezi zixhobo ziqukethe izingxenye ezingaveza ama-arcs kanye / noma Izinhlansi. Ukuvimbela umlilo kanye / noma ukuqhuma akufaki kuma-compartments Equkethe amabhethri noma izinto ezivuthayo noma endaweni Idinga imishini evikelekile yokushisa. Lokhu kuhlanganisa noma yimuphi isikhala Equkethe imishini yamandla kagesi, ama-fuel tank, noma amajoyini, Noma olunye uxhumano phakathi kwezingxenye zesistimu kawoyela.
Bheka iWarranty yemiyalo yokuthola insizakalo.
1. 1. 4 Musa uqaqe inverter / Ishaja. Iqukethe akukho okusebenzayo ngomsebenzisi Izingxenye. Ukuzama ukukhonza i-Inverter / Ishaja ngokwakho kungabangela ukwethuka kagesi noma umlilo. Ama-capacitor angaphakathi ahlala ekhokhiswa ngemuva kwakho konke Amandla anqanyuliwe.
1. 1. 5 Ukuze kuncishiswe ingozi yokuthi umuntu abanjwe ugesi, nqamula kokubili AC futhi DC amandla Kusuka ku-Inverter / Ishaja ngaphambi kokuzama noma yisiphi isondlo noma Ukuhlanza. Ukuvala izilawuli ngeke kunciphise lo mngcipheko
QAPHELA: Ukulimala kwezixhobo
Uhlangothi olukhiphayo lwe-wiring ye-AC inverter akumele lixhunywe esidlangalaleni Amandla noma i-generator. Lesi simo sibi kakhulu kunesigamu esifushane. Uma leyunithi isinda Lesi simo, sizovalwa kuze kube yilapho kulungiswa.
Ukufaka kufanele kuqinisekiswe ukuthi ukukhishwa kwe-AC inverter, kungakabiphi, kuxhunywe ku-AC yayo Okokufaka.
Isexwayiso: Ukulinganiselwa kokusetshenziswa
KUKHULU, QAPHELA QAPHELA ukuthi INVERTER / CHARGER AKUNGAKHENZISWA NGOKUXHUMANA IZINHLELO ZOKUPHILA KWEMPILO KANYE NEZINYE IZIMPAWU ZOKUSEBENZA KANYE NEMITHETHO. SENZA UKWENZA AKUKHO SIQINISEKO NOMA UKUMELELWA MAQONDANA IMIKHIQIZO YABO UKUSETSHENZISWA OKUNJALO. UKUSEBENZISA I-INVERTER / ISHAJA NGALOKHU IMISHINI ETHILE ISENGOZINI YAKHO.
1. 2 Ukuqapha Lapho Usebenza Namabhethri
1. 2. 1 Uma ama-acid e-bhisikidi isikhumba noma izingubo zokugqoka, geza ngokushesha nge-sese Kanye namanzi. Uma i-asidi ingena ebusweni, ngokushesha isisindo segazi siyasebenza Amanzi abandayo futhi uthole usizo lwezokwelapha Ngokushesha.
1. 2. 2 Ungalokothi ubhema noma uvumele inhlansi noma ilangabi endaweni ebhethri noma Injini.
1. 2. 3 Ungalahli ithuluzi lensimbi ebhethri. I-spark ephumela noma Ukuhamba okuncane ebhetri kungabangela i Ukuqhuma.
1. 2. 4 Susa izinto zensimbi zomuntu siqu ezifana namasongo, namasongo, imigexo, Futhi ubukele lapho usebenza ngebhethri yokuhola-acid. Ibhethri yokuhola-acid ikhiqiza umshini omfushane ojikelezayo okwanele Weld indandatho noma okufana nensimbi, okubangela ukushisa okukhulu.
1. 2. 5 Ukuze kuncishiswe ingozi yokulimala, ukushaja kuphela ezijulile-umjikelezo phambili acid, kuholele antimony, Ihola i-calcium gel cell, i-absorbed mat, noma i-NiCad / NiFe ifaka kabusha Amabhethri. Ezinye izinhlobo zamabhethri zingase ziqhume, zenze ukulimala komuntu siqu futhi Umonakalo.
T 1.2.6 Don ‘ukufaka inverter eduze amabhethri engekho, inverter angase nokushisa electrolyte kwebhetri futhi abangele intuthu ezonakalisayo ukumtshela futhi umonakalo / adle electronics aseduze noma izinsimbi.
2. Jikelele 1 Imininingwane
Power Sigineer Noma yimaphi amandla we-Combi Pure Sine Wave inverter / Ishaja luyinhlanganisela i inverter, ishaja nebhethri kanye AC ngokuzenzakalela ukudluliswa ukushintshela ku uhlelo eyodwa ephelele nenani eliphakeme DC ukuze AC ukuguqulwa nekusebenta 88%.
Igcwele okuyingqayizivele Izici ze-d ke ingenye ethandwa kakhulu futhi ezingabizi inverter / amashaja emakethe namuhla.
Ifaka amandla amandla okulungisa okulungisiwe, ukushaja kwesiteji esikhulu esiyinkimbinkimbi Kanye ne-sine wave wave ephumayo Ukukwazi ukuphakama okungakaze kube khona ukuhlangabezana nezidingo zamandla ezidingayo zemithwalo yokufaka ngaphandle Ukubeka engcupheni imishini.
Ibhajaji enamandla yebhethri Lokhu Noma yimuphi Amandla Combi inverter / Ishaja uya phezulu 105 Amps (ehlukahlukene onobuhle ezahlukene), futhi ngamandla isici ukulungiswa, lisebenzisa amandla 20-30% kancane AC okokufaka kuka ishaja ejwayelekile, ukugwema isicefe full uhambo noma generator overloads.
Umthamo wokulayisha ngokweqile u 30 0% kwezintathu zomkhiqizo okuqhubekayo amasekhondi kuya ku-20 ukuba thembeke ukusekela amathuluzi kanye nemishini eside.
Ukusetshenziswa esingenzi lutho umugqa ongaphakeme, cishe 4% yamandla ayo esinesilinganiso.
Lezi zici ezikhethekile zenza lo mgqa ukuncintisana kahle nama-high frequency counterparts.
T he onobuhle ayatholakala 120Vac (isigaba esisodwa), 230Vac (isigaba esisodwa) futhi 120 / 240Vac (isigaba yokuhlukanisa), kanye othomathikhi 50Hz / 60Hz imvamisa switch, emgqeni mkhiqizo luhambisana nazo zonke izindinganiso ezinkulu Umbuso emhlabeni wonke.
Lo mugqa lihlanganisa okunye okukhethekile 4 000 watt 12Vdc onobuhle sikwazi abasebenzisi imoto amandla imithwalo elanele ngesikhathi 12VDC ebhange battery ngaphandle olubekhona yebhange ibhethri yabo.
I-AC / ibhethri igunya inkinobho futhi auto generator ekuqaleni ukusebenza ukwenza kube kuhle ukulungele yini ukusebenza noma amandla isipele noma uvuseleleke izicelo amandla.
Ngo-AC imodi kuqala, w hen AC cut s off (noma uwela kobubanzi eyamukelekayo), edluliselwe ukudluliswa de-akukhuthalele kanye Umthwalo udluliselwa ngokuzenzakalelayo kumkhiqizo we-Inverter. Uma afanelekayo AC Ibuyiselwe, ukulayishwa kunikwe amandla futhi umthwalo ngokuzenzakalelayo Ixhunywe kabusha ku-AC Umbuso.
Lapho egcizelele Ibhethri Priority M ODE nge switch-DIP, le inverter ngeke luthathe amandla esiphezulu kusukela yangaphandle ugesi avuselelekayo energy izinhlelo kanye umjikelezo sakugcina ibhethri kuyodingeka. Nge ukutholakala auto generator uqale umshini wokuphehla ugesikungaba kuhlanganiswe ohlelweni njengoba emuva futhi waqala lapho voltage battery uya ongaphakeme.
Nge ibhaza ezwakalayo futhi akude L E D ukubonisa, inverter kunikeza abasebenzisi ulwazi olunzulu isimo ukusebenza, okwenza kube lula ngawo yesondlo nokuxazulula inkinga.
Kanjalo Sigineer Amandla APC Series Pure Sine Wave inverter / Ishaja kufanelekile inqwaba izicelo kuhlanganise lamandla izinhlelo, Umbuso indawo, iloli, RV mergency izimoto e njll.
Ukuze uthole okungcono kakhulu kwe-inverter amandla, kumele ifakiwe, wasebenzisa futhi zigcinwe ngendlela efanele. Sicela ufunde imiyalo kule ncwadi ngaphambi kokufaka futhi Isebenza.
2. 2 Isicelo
Amandla amathuluzi-ama-sawy, ama-drill, ama-grinders, ama-sanders, ama-buffers, ukhula kanye Ama-hedge trimmers, i-air compressors.
Imishini yehhovisi – amakhompiyutha, amaprinta, abaqaphi, imishini ye-facsimile, Amaskena.
Izinto zasendlini – abahlanza i-vacuum, abalandeli, i-fluorescent kanye ne-incandescent Izibani, Shavers, imishini yokuthunga.
Izitsha zekhishi – abenzi bekhofi, ama-blenders, ama-ice markers, ama-toasters.
Imishini yezimboni – isibani se-metal halide, isibani esikhulu socingo sodium.
Ezokuzijabulisa zekhaya ekhaya – ithelevishini, amaVCR, imidlalo yevidiyo, Stereos, izinsimbi zomculo, imishini ye-satellite.
2 .3 Izici
Ikhono eliphezulu lokulayisha ngokweqile kuze kube ngu-300% wamandla alinganisiwe (amasekhondi angu-20)
L ow zamanje quiescent, amandla l ow “Amandla Ukulondoloza Mode” Ukugcina amandla
Isiqalo se-Generator esizenzakalelayo
4 -step ibhethri ezihlakaniphile ishaja, PFC (Amandla Factor Ukulungiswa) seshaja
8 ukubeka kabusha ibhethri lokukhetha umshini webhethri kanye nokukhishwa kwe-sulffu kwamabhethri athile
P owerful icala izinga afika ku-120 Amp s, akukhetheki kusuka 0% -100%
10 ms ejwayelekile ukudluliswa isikhathi phakathi kwebhetri futhi AC, iqinisekisa amandla embili
Smart L E D akude control panel
I-AC voltage regulation iyatholakala
15s alibale ngaphambi kokuthi ukudlulisa lapho AC iyaqala, ukuvikelwa ngokwengeziwe imithwalo uma zisetshenziswa generator
A llows ziqalise futhi ngokusebenzisa amandla amabhethri mpilo
Multiple elawulwa Ukupholisa abalandeli
E xtensive p rotection s ngokumelene izimo nokhahlo ahlukahlukene
13VDC ibhethri alulame y iphuzu, wanikezela ngoba lamandla izinhlelo
2. 5 Ukusebenza kagesi
2. 5 .1 Hlanekezela
I-APC inverter / ishaja yakhiwe ngokuvumelana yomphindwa elandelayo.
Vula: I-Topology Topology.
Charge: ukuhlukanisa d Khuphula T opology.
Lisebenze s bi- isiqondiso sizana: kwelinye direction Ishintsha DC amandla kusukela ibhethri AC (inverter Mode) futhi ngakolunye uhlangothi It guqula amandla yangaphandle AC kuya DC DC Ukushaja amabhethri (AC Mode). T he esifanayo izingxenye amandla asetshenziswa kokubili izinkomba, okuholela Ekusebenziseni amandla okudlulisa amandla amakhulu ngezingxenye ezimbalwa.
Sicela uqaphele ukuthi inverter / ishaja kungasebenza kuphela kwelinye direction ngesikhathi esisodwa (ie ngeke ukusebenza Njenge-inverter kanye neshaja ngesikhathi esisodwa).
Lapho ezisebenza guqula mode, lamanje ngqo (DC) ukuthi okungena inverter kusukela amabhethri kuyinto Ihlungiwe nge-capacitor enkulu yokufaka futhi ishintshwe “On” futhi “Off” yi-Metal Oxide Silicon Field Effect Transistors (MOSFET) ngesilinganiso 50 Hz noma 60 Hz, kule isinyathelo DC is kuguquka voltage low kwemiqondo sine wave AC Usebenzisa Ukuhlelwa kwe-H-bridge nemvamisa ephakeme ye-PWM (ukuguqulwa kwe-Pulse width) inqubo. It is ke iqondiswe ku transformer iziphi izinyathelo aphansi AC voltage kuze 230 noma 120 volts.
Iyunithi has a 16 bhithi, 4.9MHZ sekhompiyutha Ukulawula umthamo wokuphuma kwevolumu kanye nemvamisa njengombane we-DC input Futhi / noma umthwalo wokukhishwa uhluka.
Ngenxa ukusebenza kahle eliphezulu MOSFET s kanye Transformers esindayo, ke okukhiphayo OKUHLANZEKILE sine igagasi AC nge THD ongaphakeme.
Ukusebenza kahle inani eliphakeme lezifundo Sigineer Amandla APC Series 88%.
T Don ‘zifana AC ekhishwa inverters ukwandisa amandla umthamo njengobujamo abanakho ukusebenza ukustaka.
I Sigineer Amandla APC Series inverters ehlukile sindisa amakhono, okwenza kube ekahle ukusingatha imithwalo ngenkani.
1 Ukuze uthole 110% <Layisha <125% (± 10%), akukho audibl e-alamu imizuzu 14, imisindo 0.5s zonke 1s ngomzuzu 15th, futhi Fault (Vala) emva ngomzuzu 15th.
2 Ukuze uthole 125% <Layisha <150% (± 10%), imisindo 0.5s zonke 1s futhi Fault (Vala) emva 1 iminithi.
3 Ukuze 300% ≧ Layisha> 150% (± 10%), imisindo 0.5s zonke 1s futhi Fault (Vala) emva 20s.
Qala ngokuthobeka kwimodi yokuguquguqula
I inverter is izakhi nge “Soft Qala “ Isici.
Lapho inverter sivuliwe, lo voltage okukhiphayo kancane kancane ramps up kusuka 0VAC ukuba voltage lilinganiselwe mayelana 1.2 isekhondi. Lokhu ngempumelelo kunciphisa kungenjalo eliphezulu kakhulu sokuqala inrush zamanje edonswa AC imithwalo ezifana Kushintshelwe Mode kwamandla okuseqophelweni exhasa. Lokhu kuzoholela ekutheni imoto engaphansi zamanje, okusho umthelela kancane imithwalo futhi inverter.
Ngemva inverter esithile sisebenza esitshalweni, kuthatha isikhathi ezilinganiselwe ukuze self ukuxilonga bese ulungele ukuletha amandla egcwele. Ngakho-ke, shintsha njalo umthwalo (emva) ngemva kwemizuzwana embalwa yokushintshela. Gwema ukuguqula umshini we-inverter ngomthwalo osevele ushintshiwe. Lokhu kungase kubangele kungakapheli ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile. Uma umthwalo ushintshiwe, kungadinga ukuqala kwamandla okuqala okuqala ukuqala. Ngakho-ke, uma imithwalo eminingi isetshenziswa amandla, kufanele ishintshwe ngalunye ukuze i-inverter ingalawulwa ngokuphakama okuphezulu uma yonke imithwalo ishintshiwe kanyekanye.
2. 5 .2 AC Charge r
Sigineer Amandla APC Series ifakwe esebenzayo PFC (Amandla Factor ilungisiwe) ibhethri ishaja multistage. Isici se-PFC sisetshenziselwa ukulawula inani Yamandla asetshenziselwa ukushaja amabhethri ukuze athole amandla amandla asondelene ngangokunokwenzeka ku-1.
Ngokungafani nezinye inverters kabani max ukushaja liyancipha zamanje ngokuvumelana voltage okokufaka AC, Sigineer Amandla APC Series ishaja uyakwazi okukhipha max zamanje nje okokufaka AC voltage ungaphakathi uhla 164-243VAC (95-127VAC ngoba 120V imodeli), futhi I-AC freq isezingeni lobubanzi be-48-54Hz (58-64Hz for model 60Hz).
I Sigineer Amandla APC Series inverter has a ngokushesha kakhulu icala ezikhona, kanye max icala zamanje kungase kushintshwe kusuka 0% -100% nge inkinobho liner kuya kwesokudla Uhlobo ibhethri isikhethi. Lokhu kuyoba usizo uma usebenzisa ishaja yethu enamandla phezu ca pacity yebhange elincane ibhethri. Ngenhlanhla, inkinobho liner kunganciphisa ngempumelelo max ukushaja wamanje 2 0% we Selilonke.
C hoosing “0” ku uhlobo ibhethri isikhethi kuzovimbela ukushaja umsebenzi.
Kukhona 3 izigaba eziyinhloko:
Ukushaja Bulk : Lena esigabeni sokuqala ukushaja. Ngenkathi ukushaja kwe-Bulk, ishaja inikeza Ibhethri ene-current constant elawulwayo. Ishaja izohlala ku-Bulk icala kuze kufike Ukumiswa icala voltage (ukunquma d ngo- ibattery Ukukhetha Uhlobo) abayifunayo.
Timer Software ngeke ukukala isikhathi kusuka A / C uqale kuze ishaja nebhethri ifinyelela 0.3V ngezansi voltage umfutho ke uthathe lesi sikhathi njengoba T0 futhi T0 × 10 = T1.
Ukuncela Ukushaja: Lena ingxenye yesibili ukushaja esiteji futhi luqala ngemva ukuncela voltage has Kufinyelelwe. Ukumisa ukushaja kunikeza amabhethri nge-voltage njalo futhi unciphisa I-DC ishaja amanje ukuze ilondoloze ukushisa kwe-voltage.
Kulesi sikhathi, inverter ngeke s kwamuncwa- timer T1; Ishaja izogcina i-voltage yokukhulisa kwi-Boost mode ye-CV kuze kube sekupheleni kwe-T1 timer. Bese uphonsa i-voltage phansi kuya kumthamo we-float. I-timer inesikhathi esincane sehora eli-1 nesikhathi esiphezulu samahora angu-12.
Float Ukushaja: I wesithathu ukushaja esiteji kwenzeka ekupheleni le ukuncela isikhathi Ukushaja. Ngesikhathi Ukushaja kwe-Float, i-voltage yokushaja iyancipha ibe yi-voltage charge voltage (enqunywe yi- Ukukhethwa kohlobo lwebhethri *). Kulesi sigaba, amabhethri agcinwa ngokugcwele futhi alungile uma kudingeka I-inverter.
Uma A / C ixhunyiwe kabusha noma voltage battery lehla ngezansi 12Vdc / 24Vdc / 48Vdc, ishaja ngeke kabusha umjikelezo ngenhla.
Uma ukukhokha igcina isimo iflothi izinsuku 10, ishaja ngeke kabusha ngamabomu umjikelezo ukuvikela ibhethri.
Isikhethi sohlobo lwebhethri
Shintsha ukulungiselelwa Incazelo Boost / Vdc Aweshubhu / Vdc
0 Ishaja ivaliwe
3 AGM 2 / Lithium Battery 14.6 13.7
4 I-asidi yokuholela ekhonjiwe 14.4 13.6
5 I-Gel EURO 14.4 13.8
6 Vula i-acid lead 14.8 13.3
7 I-calcium 15.1 13.6
8 De sulphation 15.5 (amahora amane bese u-Off)
I-12Vdc Mode (* 2 ye-24Vdc; * 4 ye-48Vdc)
Sebenzisa ngamaphakethe we-Lithium Ion Battery
“Lithium-ion” libhekisela ezihlukahlukene lithium-based ibhethri chemistries. T he ethandwa kakhulu iyona enkulu-format lithium prismatic yensimbi phosphate (LiFePO4; LFP) ibhethri.
Ishaja sethu sebhethri smart isebenza ngamabhethri ahlukahlukene e-lithium, pls hlola ama-specs ebhethri futhi uqinisekise ukuthi ukushaja kwe-algorithm kufanelana nokushayela kwamandla okushisa nokuqeda ukuvota.
Uma wethu wamanje ukushaja algorithm don ‘t ukufanisa lithium ibhethri lakho, ukwamukela uxhumane nathi ku info@sigineer.com okwesikhathi ngokwezifiso.
Umjikelezo de-sulphation ku inkinobho isikhundla 8 ephawulwe abomvu ngoba lena kulungiselelwa kuyingozi kakhulu uma ungenzi OT n ukuthi yini kabusha ukwenza. Ngaphambi kokuba uzame ukusebenzisa lo mjikelezo kufanele uqonde ngokucacile ukuthi wenzani nokuthi uzoyisebenzisa nini futhi kanjani.
Wha t kubangela sulphation? Lokhu kungenzeka nge ukungasebenzisi amabhetri, n noma uma amabhethri ashiyiwe kukhishelwa ongaphakeme ukuze ngeke ukwamukela inkokhelo. Lo mjikelezo kuyinto ephakeme kakhulu voltage icala umjikelezo desig n ed ukuzama ukuba ngivule sulphated uqweqwe elivimbela amapuleti ekuthatheni mali futhi ngaleyo ndlela bonke ow amapuleti ukuhlanza futhi ukwamukela inkokhelo waphinda.
Ukushaja amabhethri mpilo
I Sigineer Amandla APC Series inverter a llows ziqalise futhi ngokusebenzisa amandla amabhethri mpilo.
Ukuze 12V DC imodeli, ngemva voltage battery uya ngezansi 10V, uma inkinobho namanje (futhi njalo) igcinwe “ON” isikhundla, le inverter njalo exhunywe ne ibhethri, bese voltage battery alinaz ‘t iconsi ngezansi 2V, le inverter uzokwazi Ukushaja ibhethri kanye AC okokufaka oqeqeshiwe.
Ngaphambi voltage battery uya ngezansi 9VDC, ukukhokhiswa kungaba isebenze lapho inkinobho ivuliwe ukuze “Valiwe”, bese “ON”.
Lapho voltage uya ngezansi 9VDC, futhi ngephutha ushintshele OFF noma unqamule inverter kusukela yebhethri, inverter ngeke bakwazi ibhethri waphinda, ngoba CPU balahlekelwa inkumbulo phakathi kwale nqubo.
Qala phezulu ngaphandle kokusebenza kwebhethri kungenziwa ngezifiso ngesikhathi sokucela.
Ukushaja okwamanje imodeli ngayinye
Th e ukushaja umthamo uzoya isiqongo icala rate cishe ngo 3 imizuzwana. T yakhe kungadala i-generator ukulahla imvamisa, okwenza ukudluliswa inverter kwimodi ibhethri.
Kuphakanyiswe ukuthi kancane kancane ubeke umthwalo ukushaja ku generator by ukushintsha inkinobho ukushaja kusukela amaminithi max. Kanye 15s ushintshele alibale inverter yethu Sinike s generator isikhathi esanele ukuze spin up. Lokhu kuzoxhomeka kubukhulu be-generator kanye nenani lokukhokha.
Njengomthetho jikelele, i-Bulk Ukushaja yamanje okumele abe nomkhawulo 3 0% we umthamo ebhange ibhethri. Ukushaja okuphezulu okuphezulu kungasetshenziswa uma kuvunyelwe Ngumakhi webhethri.
Qaphela: Sicela usebenzise esincane isitayela ngamagugu ka- flat-ikhanda ukufakwa kokumqoka kuphela ukuvula icala zamanje ukulawula inkinobho ngobumnene ukugwema ikhefu yobudala ngenxa phezu – jikela dini.
Ukuze kuqinisekwe ukuthi ukusebenza okuhamba phambili kwe-AC ishaja lapho okufakwayo AC ivela generator, generator eceleni kufanele kube amandla okungenani 150% ngaphezu kwezihlalo inverter.
Isexwayiso! Ukusebenza nge-generator ngaphansi angcolile noma generator ne elingagunyaziwe wave ifomu kungadala ukwehluleka nisebancane engesiyo ngaphansi kwesiqinisekiso.
S wift Amandla Dlulisa
Nakuba kwi-standby mode, AC uvo we inverter njalo ukugadwa. Noma nini uma amandla e-AC ewela ngezansi AC-low voltage uhambo voltage (154 V ac, okuzenzakalelayo setting ukuze 230VAC, 90VAC ngoba 120V AC), i-inverter idlulisela emuva ngokuzenzakalelayo ukuze the Hlanekezela Mode nge okungenani amandla kokuphazamiseka ukuba nemishini akho – inqobo nje uma inverter ivuliwe Kuqhubeke. Ukudluliswa kusuka Esimosokulinda kwimodi inverter kwenzeka cishe 10 millisecond. Futhi ngisho elifushane lusuke inverter ukuze esimosokulinda.
T isikhathi sakhe sokudlulisa ngokuvamile okusheshayo ngokwanele ukugcina imishini yakho (okufaka amakhompyutha) powered up, ngaleyo ndlela inverter wethu angasetshenziswa njengoba umugqa interactive UPS.
Ukudluliswa kwamandla okuvumelanisiwe
Lapho umthwalo budluliselwe kusuka inverter AC okukhipha kwenye isipele AC umthombo wamandla ngokusebenzisa t ransfer s uyathakatha, kuzoba khona Ukuphazamiseka okuphelele kwamandla emithwalweni wokudluliselwa okuzokwenzeka.
Ukungahambisani nesigaba futhi imvamisa nomkhiqizo inverter AC kanye isipele AC umthombo ingadlulisa kungenzeka kulimaze isipele AC umthombo / umthwalo esisheshayo.
Nge eyinkimbinkimbi busebenze design, inverter wethu izoqala bavuliwe nobuningi isigaba uvo ogwini amandla amandla / generator wenze bushelelezi nokudluliselwa ephephile endaweni zero voltage ukunciphisa umthelela amamojuli amandla.
Kukhona 1 5-yesibili ukubambezeleka kusukela esikhathini izinzwa inverter ukuthi AC ngokuqhubekayo ofanelekayo khona ezikhumulweni Okokufaka uma ukudluliswa senziwa. Ukwephuza yakhiwe e ukunikeza isikhathi esanele nenjini spin-kuze voltage ozinzile futhi imvamisa futhi ugweme edluliselwe kushayana. I-inverter ngeke idlulisele ku-generator ize ikhiphe ekuphumeni komkhiqizo. Ukwephuza Futhi wenzelwe ukunikeza izingane ugweme njalo inkinobho ni lapho Umbuso okokufaka engazinzile.
2. 5. 4 I-Power Saver
Kukhona 2 zokusebenza izimo ezihlukile ngoba APC i nverter: “Amandla On” futhi “Amandla Valiwe”.
Lapho amandla switch ungaphakathi “Unit Vala”, le nverter i kunikwe amandla off.
Lapho amandla inkinobho ivuliwe ukuze noma “amandla iseva yamandla ngokuzenzakalela” noma “amandla iseva yamandla Valiwe”, le inverter ivuliwe.
Amandla isilondolozi umsebenzi iwukuba abazinikezele ukonga Ibhetri Amandla lapho AC akuyona noma kancane kudingwa imithwalo.
Kulo modi, i-inverter igxotha ukukhipha kwe-AC kufuna umthwalo we-AC (okungukuthi, uhlelo lokusebenza lwegesi). Noma nini lapho umthwalo AC (ngaphezu kuka-2 5 Watts) sivuliwe, i inverter iyasibona isidingo amandla ngokuzenzakalela iqala inverting futhi okukhipha iya voltage egcwele. Lapho kungekho umthwalo (noma ngaphansi kuka-2 5 Watts) itholiwe, le inverter uya ngokuzenzakalelayo ubuyele ku search mode ukunciphisa amandla ukusetshenziswa kusukela ebhange ibhethri.
Ngo “Amandla isilondolozi ku” mode, inverter ngizodonsela amandla ikakhulukazi abathola isikhashana s, ngaleyo ndlela ukusetshenziswa lutho kakhulu ukunciphisa D.
T naye verter kuyinto imboni ngokuzenzakalelayo ukuthola umthwalo 250ms kuzo zonke 3 0 s yesibili. Th kuyinto umjikelezo kungenziwa egcizelele imizuzwana 3 Thru the SW 3 DIP inkinobho.
Qaphela: Amandla ubuncane umthwalo ukuthatha inverter aphume imodi yokulala (Amandla Saver On) kuyinto Watts 50. Ngamamodeli wesigaba sokuhlukaniswa, amandla okulala kwemodi yokulala i-50W phakathi kwe-Hot1 ne-Neutral no-200W phakathi kwe-Hot 1 ne-Hot 2. Akukho ukutholakala komthwalo phakathi kwe-Hot2 ne-Neutral.
Qaphela: Amandla ubuncane umthwalo ukuthatha inverter aphume imodi yokulala (Amandla Saver On) 25 Watts.
I Sigineer Amandla APC Series yakhelwe nge ongaphakeme kokuvamile i dle p ower c onsumption okuyinto kuphela nje 0.8-1.8% yamandla ayo silinganisele.
Uma kumodi yomqondo wokucinga, i-LED eluhlaza yamandla izokhanya futhi i-inverter izokwenza umsindo ophazamisayo. Ngomshini ogcwele ophumayo, i-green power LED izokhanya kancane futhi i-inverter izokwenza umsindo ozwakalayo wokumamatheka. Uma inverter isetshenziselwa amandla “okungenakuguqulwa” okunikezwayo umsebenzi wemodi yosesho kufanele unqotshwe.
Amanye amadivaysi uma kuthwetshwe umzwa wokulayisha awutholakali. Izibani ezincane ze-fluorescent ziyisibonelo esivame kakhulu. (Zama ukuguqula i-plug polarity ngokuvula i-plug.) Amanye amakhomphyutha nama-elekthronikhi ayinkimbinkimbi anemithombo yamandla engabonakali umthwalo kuze kube yilapho i-voltage line ikhona. Uma lokhu kwenzeka, iyunithi ngayinye ilinde enye iqale. Ukushayela le mithwalo noma umthwalo omncane womngane kufanele usetshenziselwe ukuletha inverter ngaphandle kwimodi yayo yokusesha, noma inverter ingase ihlelwe ukuhlala egcwele amandla okuphuma.
2. 5. 5 Ukuvikelwa s
I Sigineer Amandla APC Series inverter ifakwe Ukuvikelwa s omkhulu wokuqeda ahlukahlukene elibuhlungu izimo / amaphutha.
AC Ukuvikelwa wokufaka phezu voltage / AC wokufaka Ukuvikelwa-low voltage
Okuphansi ibhethri alamu / alamu ibhethri okuphezulu
Ngokuhamba Ukuvikelwa lokushisa / Ukuvikelwa umthwalo Over
Isivikelo esifushane se-Circuit (1s ngemuva kwephutha)
Ukuvikelwa kokondla emuva
Lapho Over lokushisa / Over umthwalo zenzeka, ngemva iphutha kususwa, inkosi inkinobho kufanele kwizimo kabusha ukuqala inverter.
I okuphansi Batter y voltage uhambo iphuzu kungenziwa egcizelele kusuka ukubaluleka Wokuzenzakalelayo ka 10VDC ukuze 10.5VDC ngokusebenzisa SW1 phezu inkinobho DIP.
I inverter uzoya Over Ukuvikelwa sesikhashana lapho h udle echibini ngaphumeleli. ≥ 105 ºC (221 ℉), futhi uzoya Fault (ukuvala shaqa lokukhipha) ngemuva kwemizuzwana 30. Inkinobho kufanele usethe kabusha kusebenze inverter.
I Sigineer Amandla APC Series inverter unawe emuva ukusuthisa Ukuvikelwa okuyinto uyakugwema abaletha n AC voltage phezu AC esibulalayo okokufaka kwimodi Hlanekezela.
Ngemva isizathu iphutha kususwa, le inverter kufanele usethe kabusha ukuqala umsebenzi nse.
2. 5. 6 R ukulawula emote
Ngaphandle inkinobho iphaneli phezu phambi inverter, i extra LED noma LCD inkinobho iphaneli exhunywe kwi-port kude ngesikhathi DC ohlangothini inverter ngokusebenzisa RJ11 noma RJ45 ikhebula Futhi ungalawula ukusebenza kwe-inverter.
Uma okungaphezulu inkinobho iphaneli ixhunywe inverter nge “elawulwa kude port”, kanye master inkinobho iphaneli mayelana naleli cala inverter, panel ababili bayoba con nected futhi eziqhutshwa parallel, w ukushintsha hichever lokuqala ezivela “Unit Valiwe” ukuze “Amandla isilondolozi off “noma” Amandla isilondolozi ku “, kuyoba amandla inverter ku.
Uma imiyalo kusukela ezinezimpi ezimbili iphaneli s, inverter ozokwamukela umyalo ngokuvumelana abalulekile alandelayo:
Umsindisi wamandla ku> Amandla okusindisa amandla> Vala amandla
Kuphela uma kokubili panel abaphendukela “Unit Vala”, ingabe inverter kufanele ixhaswe ngabakwa off.
Ungalokothi uthathe intambo yocingo lapho ikhebula unamathele inverter nebhethri ixhunywe inverter. Ngisho r inverte icishiwe, lokhu ngeke kulimaze PCB akude ngaphakathi uma ikhebula is iDemo circuited ngesikhathi ukusika.
2. 5. 7 LED Inkomba & LCD
Isimo ukusebenza kwe-inverter kuboniswa LED ka- kanye nencazelo ku sticker LED.
AMANDLA AMANDLA Ukukhanya kwe-GREEN LED ku-AC Mode
INVERTER ON I-GREEN LED ukukhanyisa kwi-Inverter Mode
IZINDABA EZIPHAKATHI Ukukhanya okukhanyayo kwe-LED kumodi yokushaja okusheshayo
UMSEBENZI WOKUQALA Ukukhanya kwe-GREEN kwe-LED ku-Float Yokushajaza Imodi
HLELA I-TEMP TRIP RED LED ukukhanyisa ku Ov er lokushisa
FUTHA UKUTHANDA UKUQALA Ukukhanya kwe-RED LED ku-Over Load
AMANDLA OKUYA KUPHELA GREEN LED ukukhanyisa ku amandla iseva yamandla Mode (Amandla Saver Layisha ≦ 25 W)
T he inverter kungenziwa uxhumeke elawulwa kude LCD panel.
2. 5. 8 I-Alarm ezwakalayo
I inverter futhi kukunika alamu ezwakalayo uma kwalezi zimo zenzeka.
Ibhethri Voltage Low Inverter oluhlaza LED Lighting, futhi ibhaza ibhiphu 0.5s zonke 5s.
Ibhethri Voltage High Inverter oluhlaza LED Lighting, futhi ibhaza ibhiphu 0.5s zonke 1s,
Nokuhluleka ngemuva kwama-60s.
Vula i-Mode Over-Load (1) 110% <umthwalo <125% (± 10%), Ayikho i-alamu ezwakalayo kumaminithi 14,
Imisindo 0.5s zonke 1s e 15 ngomzuzu th futhi Fault ngemva kwemizuzu engu-15;
(2) 125% <umthwalo <150% (± 10%), imisindo 0.5s zonke 1s futhi Fault ngemva 60s;
(3) Layisha> 150% (± 10%), imisindo 0.5s zonke 1s futhi Fault ngemva 20s;
Ove r lokushisa Ukushisa kwehlisa umoya. ≥105ºC (221 ℉), ezingaphezu kuka-sesikhashana obomvu LED Lighting, imisindo 0.5s zonke 1s;
2. 5. 9 FAN Operation
Ukuze 1-3KW, kukhona omunye amaningi elawulwa DC fan nezoqala ukusebenza ngokuvumelana logics elandelayo.
Ku-4-6KW, kunye multipl e elawulwa DC fan eyodwa AC fan. I-fan ye-DC izosebenza ngendlela efanayo neyodwa ku-1-3KW, kuyilapho i-AC fan izosebenza kanye uma kukhona ukukhishwa kwe-AC kusuka ku-inverter.
Ngakho lapho inverter kusesandleni imodi yeseva, fan AC izosebenza ngezikhathi ekuphenduleni ishayela othunywe inverter e amandla imodi yeseva yamandla.
Ukusebenza kwe-DC fan ehlangothini lokugcina le-DC lilawulwa kulokhu okulandelayo:
Isimo Faka Isimo Shiya isimo Isivinini
HLELA SINK TEMPERATURE T < 85 ℃ (185 ℉) T ≥ 85 ℃ (185 ℉) 50%
I-CHARGER CURRENT I ≤ 50% Max Mina> 50% Max 50%
Mina> 50% Max Mina ≤ 40% Max 100%
(I-INV MODE) Layisha <50% Layisha ≥ 50% 50%
Layisha ≥ 50% Ukulayisha ≤ 40% 100%
Vumela okungenani 30cm ka imvume arou nd i inverter ukuze komoya. Qinisekisa ukuthi umoya ungasakaza ngokukhululekile nxazonke.
Fan umsindo ezingeni <60db at ibanga 1m
2.5.1 0 Izinguquko ze-DIP
Ekupheleni kwe-DC kwe-inverter, kunezinguquko ezinhlanu ze-DIP ezenza abasebenzisi bakwazi ukwenza ngokwezifiso ukusebenza kwedivayisi.
Shintsha # Shintsha Umsebenzi Isikhundla: 0 Isikhundla: 1
SW1 (AC Priority) Battery Phansi Trip Point 10.0VDC 10.5VDC
SW1 (Ibhethri Priority) 10. 5 VDC 1 1 .5VDC
SW2 (230Vac) Ibanga Lokungeniswa le-AC 1 76 -2 42 V ac ± 4% 1 60 -2 64 V ac (40Hz +) ± 4%
SW2 (120Vac) Ibanga Lokungeniswa le-AC 100-135 V ac ± 4% 90-135 V ac (40Hz +) ± 4%
SW3 I-Power Save Gweba ku-ON / OFF I-Off Off Amandla iseva yamandlaOn (3 amasekhondi)
SW4 Ukushintshwa kwamafrikhthi 50Hz 60Hz
SW 5 Ibhethri / AC Priority AC Priority Priority ibhethri
Okuphansi Ibhethri Trip Point (SW1) :
Ukususwa okujulile kwe-acid lead lead kubangela ukulahlekelwa okuphezulu emandleni nasekugugeni kwasekuqaleni. Ngo isicelo ezahlukene s ehlukile-low voltage Ukukhipha ezingeni luncanyelwa. Isibonelo, izinhlelo zokusebenza zelanga, Umsebenzisi angase ahlose ukuthi abe ne-DOD encane yokwandisa umjikelezo wokuphila kwebhethri. Nakuba izinhlelo zokusebenza mobile umsebenzisi s angabuza Uhlose ukuba ne-DOD engaphezulu ukunciphisa umthamo webhethri kanye nesisindo somzimba.
Ukuze 12VDC imodeli s, lapho inverter ungaphakathi AC imodi igunya (SW5 at “0”), okuphansi Ibhethri Trip Point akukhetheki ngesikhathi 10.0 /10.5VDC. It kungenziwa egcizelele 10.5 /11.5 V dc nge SW5. Lokhu ukuvimbela amabhethri ekudlulelweni okungaphezulu ngenkathi kunomthwalo omncane kuphela osetshenziselwa umguquli.
* 2 for 24VDC, * 4 for 48VDC
AC wokufaka Ibanga (SW2):
Kukhona ezahlukene eyamukelekayo AC okokufaka ububanzi s tinhlobo letehlukene imithwalo.
Kwamanye isihlobo ly ebucayi zobuchwepheshe s, okokufaka ububanzi emincane 1 76 -2 42 Vac (100-135V ngoba 120Vac onobuhle) kuyadingeka ukuze kuvikelwe m.
Nakuba kwabanye resistive umthwalo s asebenza ngendlela ebanzi voltage range, uhla okokufaka AC kungenziwa egcizelele 1 60 -2 64 Vac (90-135V ngoba 120Vac onobuhle), lokhu kusiza ukuthi amandla umthwalo s ngamandla kakhulu AC okokufaka ngaphandle Ukushintshwa njalo ebhange lebhethri.
Mina n ukuze wenze inverter ukwamukela ukungcola amandla y kusuka generator, lapho SW2 esitshalweni libeke “1”, le inverter ngeke adlule okufakwayo AC nge voltage ebanzi futhi imvamisa (40Hz plus f noma 50Hz / 60Hz). Ngakho-ke, ishaja ye-AC izophinde isebenze emshini ovulekile kanye ne-freq range (4 3 Hz plus f noma 50Hz / 60Hz).
T yakhe uyogwema ukushintsha njalo phakathi kwebhetri futhi generator. Kodwa abanye imithwalo ebucayi uzohlupheka kusukela ongaphakeme amandla izinga.
Ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo kumele ngokucacile igcwaliseke.
Amandla Londoloza ngaphezulu / OFF (SW3):
Ngaphansi Ibhethri Priority Mode (SW 5 i n beka “1”), i-inverter kungenziwa luvulwe phakathi izindlela ezimbili: Amandla Saver Imodi (SW3 endaweni “1”) futhi Unit Valiwe Ukushaja Mode (SW3 endaweni “0”). I p ower Shintsha kufanele ibe “Amandla isilondolozi ku” isikhundla sonke isikhathi ngokusebenzisa i-le misebenzi.
Ngo amandla iseva yamandla Mode, le inverter ekuqaleni kwimodi eceleni futhi ithumela ishayela ukuthola khona umthwalo njalo ngemizuzwana 3. I-pulse ngayinye ihlala ngama-250ms. Inverter izohlala esimweni sokulinda kuze kube yilapho umthwalo utholakele. Khona-ke bayoze baphaphame Imodi eceleni bese uqale sihlanekezele ugesi kusukela ebhange battery ukuphakela umthwalo. Njengoba lo msebenzi ungaphansi kweBettery Priority, umshini we-inverter uyohlala ethanda ukuguqula ugesi kusuka ebhetri kuqala noma kukhona okwamanje ofanelekayo okufakwayo kwe-AC. Kuphela uma voltage battery ingaphansi kwe-low voltage alamu iphuzu, ingabe inkinobho inverter ukuze amandla okokufaka AC ibhethri bese usinika umthwalo ngesikhathi esifanayo.
Lokhu amandla iseva yamandla Mode ungashintshwa Unit Valiwe Ukushaja Imodi nge SW3 ngu ukushintsha yona “0” isikhundla (SW 5 namanje i n “1”).
“Unit Valiwe Ukushaja” kuzokwenza ishaja inverter ukukhokhisa i amabhethri ngangokunokwenzeka ngesikhathi ngaphandle ukudedela kubo.
Ngo “Unit Valiwe Ukushaja” mode, inverter kuzohlala kwimodi eceleni ngaphandle Bebona imithwalo. It ngeke okukhipha noma yimaphi amandla noma ngabe i-viral load sivuliwe, futhi uhlale kuphela engenzi lutho kule modi uma kungekho okokufaka AC.
Lapho AC okokufaka afanelekayo ekhona, sizoqala ukushaja ibhethri bese ushintshela amandla imithwalo.
Lesi sici kuhle efanelekayo izicelo lapho amandla ukulondolozwa ngoba amabhethri liyadingeka.
Char Ging izoqaliswa usukhwalifayile AC ukhona, kuyilapho ukudedela kukhutshaziwe.
I inverter ibusa kuphela kancane njengoba 3 Watts ngo “Unit Valiwe Ukushaja” Imodi.
Umvuthwandaba ophumayo we-inverter ungasethwa ku-50Hz noma ku-60Hz yi-SW4 okwenza ishaja yokuguquguqula ibe yizibonelo zomhlaba wonke wezinhlelo eziningi zikagesi.
AC Priority / ibhethri (SW5):
Inverter yethu yakhelwe nge-AC kuqala ngokuzenzakalelayo. Lokhu kusho, uma AC okokufaka samanje, ibhethri lizokhokhiswa lokuqala, futhi inverter ngeke uthumele AC okokufaka amandla umthwalo. Kuphela uma okokufaka AC esiqinile isikhathi esiqhubekayo ezingu-15 ingabe inverter uqale umjikelezo inverting ibhethri ukuvikela ibhethri. Ngemva 1 avamile ukushaja umjikelezo ac ngokusebenzisa baba, buyobuyiselwa.
I-AC Priority futhi Ibhethri Priority inkinobho kuyinto SW 5 . Uma ukhetha igunya yebhethri, inverter ngeke phendukisela kusukela ibhethri naphezu AC input. Kuphela uma voltage battery ufinyelela-low voltage alamu iphuzu (10.5V dc ngoba 12V dc, 21Vdc ngoba 24Vdc, 42Vdc ngoba 48Vdc ) , ngeke ukudluliswa inverter ukuze AC i nput, ukushaja ibhethri, bese ubuyele emuva kwebhethri uma ibhethri ngokugcwele icala. Lokhu kusebenza ikakhulukazi somoya / zonozungezilanga usebenzisa amandla Umbuso njengoba isipele.
Ayikho te: Kwimodi ibhethri kuqala, lapho afanelekayo AC okokufaka okokuqala futhi voltage battery ingezansi 12.5Vdc ( 1 2 .5V dc ngoba 12V dc, 25Vdc ngoba 24Vdc, 51Vdc ngoba 48Vdc) , i-inverter izoya igunya ibhethri imodi kuphela ngemva umjikelezo b ulk c harging futhi zimunce ukushaja kuyinto sekugcineni ed . I inverter Ngeke bangene iflothi imodi ukushaja.
2.5.1 1 Auto Generator Qala
I inverter ungaqala up generator lapho voltage battery uya ongaphakeme.
Lapho inverter iya ibhethri alamu ongaphakeme, kungaba zithumela umlayezo ukuqala a generator ujike le generator off emva ukushaja ibhethri isiqedile.
I auto gen isiqalo sici izosebenza kuphela ugesi ezithinta okuzenzakalelayo isiqalo khono. I generator kumele babe iqale futhi bayeke zokulawula [okungukuthi, i-starter kagesi binda kagesi (for uphethiloli amayunithi)], futhi izinzwa nokuphepha ukuze bakwazi ukuqala futhi bayeke ngokuzenzakalelayo.
Kukhona evulekile / edluliselwe eduze ezokwenza short circuit izintambo emihle nemibi kusuka generator ukuqala ukulawula. Okufakwa DC voltage ziyahlukahluka, kodwa max yamanje edluliselwe okuthwala kuyinto 16Amp.
I-Auto Generator Qala izikhonkwane esibulalayo kungukuthi lihlukaniswe .
Ngo kwalokho , lezi izikhonkwane ezimbili lungasetshenziswa njengoba oxhumana ezomile ukuba ithumele ” okuphansi Battery Voltage ” isibonakaliso nedivayisi yangaphandle alamu.
2.5.1 2 Ibhethri lokushisa Eqonda
Ukusebenzisa efanele icala voltage kubalulekile ekuzuzeni ukusebenza kwebhethri elikhulu nokuphila kade. I enhle icala voltage kudingwa amabhethri izinguquko lokushisa ibhethri.
Inzwa lokushisa ibhethri evumela isilawuli kwenkokhiso ngokuqhubekayo ulungise kwenkokhiso voltage esekelwe lokushisa ibhethri langempela.
Izinga lokushisa isinxephezelo kwenkokhiso voltage liyasiqinisekisa ukuthi ibhethri othola efanele icala voltage njengoba lokushisa ibhethri kuyahlukahluka .
I wonke line ifakwe Ibhethri lokushisa Eqonda for lenyuka ukunemba ukushaja.
Uthumela ulwazi eqondile ishaja, okuyinto ulungisa ngokuzenzakalela voltage ukusiza ukuqinisekisa kwebhethri ngokugcwele kuye ezingeni lokushisa elifanele yokumiswa ibhethri lakho.
Lapho voltage battery iphelile 40 ℃ (104 ℉ ), kuyonciphisa voltage ukushaja by 0.1Vdc nge njalo ngezinga elithile lokushisa kuyanda.
Thina batusa ukuthi ufake ibhethri lokushisa Izinzwa kuwo wonke amabhange ukuvikela amabhethri kwakho kanye nokunikeza ukushaja kahle ebhange ngamunye.
Inzwa lokushisa ibhethri Babhokile ohlangothini ibhethri noma kunoma iyiphi enye indawo lapho izinga lokushisa eqondile ibhethri kungatholakala ezifana ibhethri obandayo Racks.
Ithebula elilandelayo lichaza cishe kangakanani voltage ingase yehluke kuye ngesistimu lokushisa amabhethri.
inverter Isimo Tempera wemvelo oyisi- ku Waw Ngakanani ishaja Ukusebenza
Mode ishaja BTS ≥ 50 ℃ (122 ℉ ) icima ngokuzenzakalelayo ishaja
BTS ≤ 40 ℃ (104 ℉ ) Iguqulela ngokuzenzakalela ku ishaja
Mode inverter 40 ℃ (104 ℉ ) ≤ BTS ≤50 ℃ (122 ℉ ) Kwandisa voltage low shaqa phuzu ngokulandisa 0.5Vdc
BTS ≥ 50 ℃ (122 ℉ ) Ngokuhamba Tem p Fault
A Ibhethri lokushisa Inzwa Kuye kwanikezwa njengendlela ehlukene ACC essory. Senziwa 32,8 ‘ / 10m ikhebula.
Okubalulekile: Uma izinga lokushisa ibhethri ovunyelwe ukuba bawele okushisa abandayo kakhulu, inverter nge BTS angeke bakwazi amabhethri abandayo ashona kahle ngenxa esiphezulu voltage ukulinganiselwa inverter. Qinisekisa ukuthi amabhethri bavikelekile eshisa kakhulu.
Ngolwazi oluthe xaxa lobuchwepheshe, sicela uthintane nathi.
2. 5 .1 3 Ezinye izici
Ibhethri voltage alulame y isiqalo
Ngemva voltage low ibhethri uvale (10V ngoba 12V imodeli noma 20V ngoba 24V imodeli noma 40V ngoba 48V imodeli ), i-inverter uyakwazi ukubuyisela ukusebenza ngemva voltage battery uyalulama ukuze 13V / 26V / 52V (ngamandla inkinobho namanje ” Ngo ” isikhundla). Lokhu umsebenzi kusiza ukugcina abasebenzisi zabasebenzi eyengeziwe kabusha inverter lapho voltage ongaphakeme ibhethri ubuyela ububanzi kuyamukeleka lamandla izinhlelo.
Ungalokothi ushiye imithwalo zingagadiwe, abanye imithwalo (ofana Heater) kungadala ingozi s ezimweni ezinjalo.
Kungcono ukuvala konke off emva-low voltage uhambo kuka ukuba ashiye umthwalo wakho ku ingozi yomlilo . Akekho ofuna s ukubuyela ekhaya, ukuthola indlu sizungezwe umlilo amaloli, futhi Naughty endaweni izingane toast izinja yamvuthela endlini yakhe.
Auto Gen Qala
I inverter kungenziwa egcizelele ukuthi ziqalise a generator lapho voltage battery uya ongaphakeme.
Lapho inverter iya ibhethri alamu ongaphakeme, kungaba zithumela umlayezo ukuqala a generator, bese uvula i- generator off emva ukushaja ibhethri isiqedile.
I auto gen isiqalo sici izosebenza kuphela ugesi yakhelwe ukusebenza nalesi sici. Th engakafi evulekile / vala edluliselwe ukuthi ngeke short circuit ikhebula emihle nemibi kusuka a generator. Okufakwa DC voltage ziyahlukahluka, kodwa Max yamanje edluliselwe okuthwala kuyinto 16Amp.
I wonke ulayini inverters selwenziwe nge enamathela conformal phezu PCB , okwenza kube amanzi, nokugqwala, futhi uthuli nemithi.
Nakuba lezi amayunithi zenzelwe ukumelana ukugqwala kusukela emoyeni okunosawoti, kungukuthi zingena ubufakazi.
3.1 Unpacking futhi Ukuhlolwa
Ukususa ngokucophelela inverter / ishaja kusukela lokuthumela yayo iphakethe kanye nokuhlola konke ukuphithizela okuqukethwe.
Qinisekisa izinto ezilandelayo afakiwe:
· I inverter / Ishaja
· Olubomvu black DC esibulalayo nesembozo
· AC esibulalayo block ikhava nge ngezikulufo ezimbili Phillips
· Flange nuts ababili kanye 4 M8 Phillips nezikulufi (efakwe DC ezikhumulweni).
· Omunye Manual Umnikazi sika
Uma izinto Ubonakala iyashoda noma ilimele, uxhumane nomthengisi yethu ogunyaziwe noma kithi . Uma kungenzeka, gcina ibhokisi lakho lokuthumela. Kuyokusiza ukuvikela inverter yakho kusuka umonakalo uma wake kumele libuyiselwe wenkonzo yasensimini. Gcina ubufakazi bokuthenga,-of-ukuthenga kwakho njengoba irekhodi ubunikazi bakho; izophinda ezidingekayo uma iyunithi kufanele zidinga umsebenzi iwaranti.
3.2 Ukufakwa Indawo
Landela zonke imithetho yangakini ukufaka inverter.
Sicela ufake imishini ngendlela n INDOOR indawo eyomile, Clean, Cool nge komoya okuhle.
Lokushisa Ukusebenza : – 10 ℃ ukuba 40 ℃ (-14 ℉ ukuba 104 ℉ )
Lokushisa Isitoreji : – 40 kuya 70 ℃ ( -40 ℉ ukuba 158 ℉ )
Umswakama isihlobo : 0% kuya ku-95% , non – ushintsha uba yileli
Ukubandisa : Ephoqelekile emoyeni
Isixwayiso: Ezinye amamodeli inverter s kukhona esindayo. Sebenzisa amasu ephakamisa efanele ngesikhathi sokufaka ukuze avimbele ukulimala siqu .
I inverter akufanele ifakwe endaweni evumela uthuli, intuthu, izinambuzane noma namagundane ukungena noma uvimbe ukupholisa ukuvuleka the inverter sika.
Le ndawo futhi kumelwe abe umuntu okungekho iyiphi ingozi ukufingqa, amanzi noma iluphi olunye uketshezi ukuthi ungafaka noma bawe phezu inverter.
I wonke ulayini inverters icutshungulwe nge enamathela conformal phezu PCB, okwenza kube amanzi, nokugqwala, futhi uthuli nemithi.
T ukuphila kwakhe inverter sika akwaziwa uma esetshenziswa kulezi zinhlobo ezindaweni, futhi inverter ukwehluleka ngaphansi kwalezi zimo azihlanganisiwe ngaphansi kwesiqinisekiso.
Kuphakanyiswe ebhange ibhethri igcinwe eduze ngangokunokwenzeka kuze inverter. Okulandelayo kuyinto aphakanyisiwe wiring inketho 3 imitha DC ikhebula.
Sicela uthole zikasayizi elandelayo wire. Endabeni ka DC ikhebula isikhathi eside kunaleso 3m, sicela ukhuphule Ingxenye evundlile ikhebula ukunciphisa ukulahleka.
amandla DC wokufaka voltage wire Gage
Sicela f ollow le ngenhla zikasayizi wire imfuneko .
Omunye ikhebula kusizuzisa ngaso sonke isikhathi, kodwa uma kunenkinga ukuthola ubukhulu Kunconywa noma ikhebula emikhulu , izintambo ezincane eziningi azosebenza. Ukusebenza kwanoma iyiphi umkhiqizo kungenziwa ngcono ngoku ikhebula mkhulu futhi ugijimela emifushane, ngakho uma ungabaza round up bese ugcine ubude kube kufushane ngokusemandleni.
amakhebuli Ibhethri kufanele baye crimped (noma okungcono, soldered futhi crimped) asetshenziswa zethusi kokucindezelwa lugs ngaphandle aluminium lugs lokukhanda. uxhumano Soldered wedwa ayamukeleki. Ikhwalithi ephezulu, UL-efakwe ohlwini ibhethri izintambo ziyatholakala .Le izintambo kukhona anemibala ne ingcindezi crimped, uphawu indandatho ezikhumulweni.
Ibhethri esibulalayo kumelwe ahlanzeke ukunciphisa ukumelana phakathi esibulalayo DC futhi ikhebula uxhumano. A elibi nenqwaba ukungcola noma namachibi kungenzeka ziholele ikhebula esibulalayo okweqile ngezikhathi okusezingeni eliphezulu draw lwamanje. Sebenzisa esintamo wire ibhulashi futhi ususe wonke ebhuqwini ukugqwala kusukela terminals izintambo ibhethri.
Ukunciphisa i-RF ukuphazamiseka
Ukuze wehlise umphumela ukuphazamiseka Babechichima, ukusonta DC amakhebuli. Ukuze kuqhutshekwe nokunciphisa RF ukuphazamiseka, kuvikela nobe kusita izintambo nge sheathing / zethusi ucwecwe / ukwaluka.
Taping ibhethri izintambo ndawonye ukwehlisa inductance
Ungagcini izintambo ibhethri ziqhelelene kakhulu. Uma kwenzeka zingavumi ukusonta izintambo, uwagcine aqoshiwe ndawonye ukwehlisa inductance yabo. inductance encishisiwe ye izintambo ibhethri kusiza ukuphungula voltages eyenga. Lokhu kunciphisa yezwakala ku izintambo kwebhetri futhi ethuthukisa ukusebenza kahle.
ISEXWAYISO Torque isilinganiso lobubanzi DC ukuphela 12.5NM-20.5NM (9.25-15.19 iphawundi-foot), kanye ne-torque engu aphakanyisiwe isilinganiso kuyinto 17NM (12.6 iphawundi-foot). Ngokuhamba torquing zingase zephule umshudo.
I inverter is ukuguqula polarity evikelwe. Ukubuyisela emuva polarity lwebhethri DC uxhumano okokufaka kuyoba umonakalo ohlala njalo kuya inverter okuyinto engamboziwe ngaphansi kwesiqinisekiso. Njalo hlola polarity ngaphambi kokwenza ukuxhumana inverter.
I inverter iqukethe capacitors ezingase ukukhiqiza inhlansi lapho kuqala exhunywe kwi ibhethri. Ungakhwezi endaweni angavalelwa gumbi nge battery ukukhiphela noma umoya .
Qinisekisa ukuthi inverter kuvaliwe phambi ukhupha izintambo ibhethri, nokuthi AC linqamuka okokufaka inverter.
Sincoma ukuthi usebenzise 10 ukuze 5Awg wire ukuxhuma kwi-block ac esigungwini.
Lapho kwimodi AC ufake AC uzokwanelisa kokubili imithwalo futhi AC ishaja, a mkhulu wire geji wokufaka AC liyadingeka. Pls xhumana ngogesi abaqeqeshiwe mayelana ethize wire gauge kuphoqelelwe wire impahla namandla inverter.
Kukhona 3 izindlela ezahlukene yokuxhuma block esibulalayo kuye imodeli ukuphi. Zonke wirings bathobelana CE, Call lethu losekelo tech uma ungaqiniseki ngendlela ukuxhuma izintambo zezibani iyiphi ingxenye inverter yakho.
Wiring Inketho 1
230V isigaba esisodwa / 120V isigaba esisodwa
Okufakiwe: Ground + umugqa Zezıhlabane + Ngiphakathi nendawo
Lokukhipha: Ngiphakathi nendawo + umugqa Zezıhlabane + Ground
Wiring Inketho 2
120/24 0V yokuhlukanisa isigaba
Okufakiwe: Ground + umugqa Zezıhlabane + umugqa Zezıhlabane
Lokukhipha: umugqa Zezıhlabane + umugqa Zezıhlabane + Ngiphakathi nendawo
Wiring Inketho 3
Okufakiwe: Ground + umugqa Zezıhlabane + umugqa Zezıhlabane lokukhipha: umugqa Zezıhlabane + Ngiphakathi nendawo
Bathi: Esimweni esinjalo, ngamunye 120Vac okukhipha hotline ungenziwa kuphela baphathe max sengxenye umthamo esinesilinganiso.
Wiring Inketho 2 futhi Wiring Inketho 3 kuphela ezivumelekile 110 / 220V yokuhlukanisa isigaba onobuhle .
Pls izintambo wonke amanye amamodeli ngokuvumelana Wiring Inketho 1.
ISEXWAYISO Ukuze ukuhlukana isigaba onobuhle , AC okokufaka kokungathathi hlangothi ayidingelwa wiring. Ungalokothi Xhuma wokufaka Ngiphakathi nendawo ukuze Ground noma lokukhipha Ngiphakathi nendawo. Umonakalo w iyagula r esult okuyinto engamboziwe ngaphansi kwesiqinisekiso .
I voltage okukhiphayo of lokhu uni t akumelwe neze ixhumeke okokufaka AC ukuphela yayo, sindisa noma ukulimala kungaholela.
Njalo sw i tch phezu inverter phambi wokufaka kunoma iyiphi into yokwenza.
Umonakalo odalwe AC wiring amaphutha azihlanganisiwe ngaphansi kwesiqinisekiso.
Ukuvimbela sithatha we-AC lokukhipha
I-AC okukhipha unit akufanelanga exhunywe kwi-Umbuso indawo amandla / generator.
Okunjalo uxhumano kungaholela operation parallel of the ezahlukene ugesi kanye AC kusukela Umbuso / generator siyokondliwa emuva ku iyunithi okuzokwenza kweso ilimaze inverter futhi kungase kube ingozi yomlilo nokuphepha.
3. 5 isisekelo
Xhuma n AWG 8 geji noma ithusi enkulu wire phakathi esibulalayo isisekelo phezu inverter nomhlaba ohlelweni isisekelo noma imoto chassis.
3. 6 Ukukhweza i inverter
Ukuze ukhweze inverter ngokuphephile, t h e surface kanye hardware obandayo kumelwe futhi bakwazi ukusekela okungenani kabili isisindo inverter. Ukuze kuhlangatshezwane zokulawula ukuphepha nezidingo, le Sigineer Amandla APC Series kufanele ukukhwezwa :
1: O na endaweni evundlile (eshalofini noma ithebula phezulu ) nge ohlangothini phezulu kuze ,
2: O na ebusweni mpo ( efana udonga) ne DC ezikhumulweni ebhekene kwesokunxele kanye fan-eksisi horizonta l .
3: O na ebusweni mpo ( efana udonga) ne DC ezikhumulweni ebhekene phansi i d fan-eksisi mpo .
Isexwayiso! Don ‘ t ukhweze inverter esiphendula esibhekisa phansi.
Ebusweni inverter ungase uthole njengoba eliphezulu 80 ℃ (176 ℉ ) ngesikhatsi kokuhlinzwa, ningathinti.
Iyunithi kufanele efakwe ngakho cishe akunakwenzeka ukuba mbeni abantu.
Ngemva determinin g isikhundla obandayo, ubheke Ubukhulu ngokomzimba njengoba kukhonjisiwe ngezansi sibalo s noma usebenzise kumila inverter njengesibonisi ukumaka obandayo izindawo isikulufa. Ngemva wokugubha obandayo izindawo isikulufa, ukhuphule iyunithi hardware ezifanele obandayo.
4 Ukuxazulula G uide
Ukuxazulula liqukethe ulwazi mayelana nendlela uxazulule izimo iphutha kungenzeka ngenkathi usebenzisa APC inverter & Ishaja.
Ishadi elandelayo iklanyelwe ukukusiza ngokushesha ukukhomba inverter ezivamile f ailures.
Inkomba kanye ibhaza
Inkomba yekhava phezulu LED Remote Shintshela
Isimo Into Ogwini GUNYA inverter KU CHG FAST iflothi CHG PHEZU TEMP UHAMBO PHEZU umthwalo UHAMBO AMANDLA isilondolozi KU Batt
CHG inverter alamu ibhaza
Mode CC √ × √ × × × × √ × × ×
CV √ × √, Blink × × × × √ × × ×
iflothi √ × × √ × × × √ × × ×
Hlala ULINDILE √ × × × × × × × × × ×
Mode inverter inverter On × √ × × × × × × √ × ×
amandla iseva yamandla × × × × × × √ × × × ×
Mode inverter Battery Phansi × √ × × × × × × √ √ Beep 0.5s zonke 5s
ibhethri okuphezulu × √ × × × × × × √ √ Beep 0.5s zonke 1s
Ngokweqile Hlanekezela Mode × √ × × × √ × × √ √ Bheka ” alamu oluzwakalayo “
Over-Temp Hlanekezela Mode × √ × × √ × × × √ √ Beep 0.5s zonke 1s
Mode Line Over-Temp √ × √ × √ × × √ × √ Beep 0.5s zonke 1s
Ngokuhamba Charge √ × √ × × × × √ × √ Beep 0.5s zonke 1s
Fault Fan Lock × × × × × × × × × × Beep okuqhubekayo
ibhethri okuphezulu × √ × × × × × × √ × Beep okuqhubekayo
Ngokweqile Hlanekezela Mode × × × × × √ × × × × Beep okuqhubekayo
lokukhipha iDemo × × × × × √ × × × √ Beep okuqhubekayo
Over-Temp × × × × √ × × × × × Beep okuqhubekayo
Ngokuhamba Charge × × √ × × × × √ × × Beep okuqhubekayo
Emuva Okuphakelayo iDemo × × × × × × × × × × Beep okuqhubekayo
uphawu imbangela ezingenzeka Isixazululo ezinconyiwe
Inverter ngeke uvule ngesikhathi sokuqala amandla phezulu. Amabhethri kungukuthi exhunywe, okuxekethile ibhethri-side ukuxhumana.
voltage battery okuphansi. Hlola amabhethri kanye ikhebula ukuxhumana. Hlola DC fuse futhi full.
Ayikho AC okukhipha voltage akukho inkomba ikhanyisa ON. Inverter iye ngesandla uphendukile kwimodi OFF. Cindezela inkinobho ukuze Amandla isilondolozi ku noma Amandla isilondolozi off isikhundla .
AC okukhipha voltage uphansi futhi inverter uphendulela imithwalo OFF ngesikhathi esifushane . ibhetri iphansi. Hlola isimo amabhethri kanye ashona uma kungenzeka.
Ishaja inoperative futhi iyunithi ngeke ukwamukela AC. AC voltage liye lehla
ngaphandle ukubekezelelana Hlola AC voltage ngoba efanele voltage imvamisa .
Ishaja ufakela ephansi icala rate. Izilawuli Ishaja kuthiwa engafanele setha.
Okuphansi AC voltage okokufaka .
Ibhethri Okuxekethile noma AC okokufaka ukuxhumana. Bheka esigabeni ukulungisa “Ishaja Ukukala”.
Umthombo wakufanelekela AC.
Hlola zonke DC / uxhumano AC.
Ishaja uphendulela OFF ngenkathi ishaja kusukela generator. High AC okokufaka voltages kusukela generator. Layisha generator phansi nge komthwalo osindayo.
Jikela voltage generator okukhipha phansi.
Imithwalo ezizwelayo ukuvala okwesikhashana uma udlulisa phakathi grid inverting. Inverter sika voltage okuphansi uhambo voltage kungenzeka iphansi kakhulu ukusekela imithwalo ethile. Khetha ewumngcingo AC voltage ku inkinobho DIP, noma Faka UPS uma kungenzeka.
Noise kusukela transformer / icala * Ukusebenzisa imithwalo ethile efana izinwele uya woma Susa imithwalo
* Isizathu sokuba umsindo transformer kanye / noma icala
Lapho inverter imodi kanye transformer kanye / noma icala we inverter ngezinye izikhathi kungase dlidliza futhi wenze umsindo.
Uma umsindo uvela transformer.
Ngokusho izimfanelo inverter wethu, kukhona omunye Uhlobo lomthwalo okuyinto ngeke okungenzeka kakhulu ukuba abangele rattles ka transformer.
Lokho a isigamu – wave umthwalo, umthwalo esebenzisa kuphela a umjikelezo kwesigamu amandla (bheka umfanekiso 1) . Lokhu Amathrendi ukubangela ukungalingani kazibuthe ensimini ka -transformer, ekunciphiseni ukalwe yayo freq ukusebenza kusuka 20K H z ukuba, anothi, mhlawumbe 15KHz (ke iyahlukahluka ngokusho imithwalo ezahlukene) . Ngale ndlela, i-freq umsindo uwela ncamashi ukuze uhla (200Hz-20K H z) ukuthi abantu indlebe kungaba uyezwa .
Umthwalo ezivame kakhulu amaKristu anjalo anomusa izinwele uya woma.
Uma umsindo livela icala .
Ngokuvamile lapho ukulayishwa imithwalo exhasa, le kazibuthe ensimini eyenziwe transformer igcina ukuheha ni noma releas ni le steel icala ngesikhathi freq ethize, lokhu kungase futhi ca u se umsindo.
Ukunciphisa amandla umthwalo noma usebenzisa i inverter nge umthamo omkhudlwana ngokuvamile ukuxazulula le nkinga.
Umsindo willn ‘ t oyolimaza kuya inverter noma imithwalo.
Thina ezigunyaza lo mkhiqizo ngokumelene yokulimala izinto futhi bewumsebenzi isikhathi esisodwa ngonyaka kusukela osukwini othenge futhi kulungise noma indawo yayo yonke engaphelele APC inverter lapho wabuyela ngqo enesitembu kuqala, ukuze umakhi. Lesi siqiniseko kuzoxoxwa uyize uma iyunithi uye wahlupheka yikuphi ukulimala ngokomzimba sobala noma ukuguqulwa noma ngaphakathi noma ngaphandle futhi awubhekene umonakalo okuvela ekusebenziseni okungafanele ezifana wokufaka iyunithi ibe ugesi ezingafaneleki, sizama ukuqhuba imikhiqizo nezimfuneko amandla ngokweqile ukusetshenziswa , ukuhlanekezela polarity, noma usebenzise ezindaweni ezingafanele.
ISIQINISEKISO akubandakanyi WEZABASEBENZI, UKUHAMBA enkohlakalo, NOMA OTHER izindleko ezivelayo FOR ukulungisa, UKUKHISHWA, ukufakwa, isevisi, ukuxilonga imbangela noma UKUPHATHWA OF NOMA IZINGXENYE engaphelele noma esikhundleni IZINGXENYE. THE WARRANTOR eqala akukho icala nganoma komonakalo wengozi noma wamabomu OKWAMABOMU KWANOMA YILUPHI UHLOBO.
UKULAHLEKELWA NOMA UKULIMALA: Ukulahlekelwa noma ukulimala sisendleleni kungumsebenzi esiphathiswa. Nanoma yisiphi isicelo kufanele owasifaka inkampani yezokuthutha ekuletheni. -Invoyisi, i-invoyisi kanye kudiliviwe nge umonakalo waphawula kuwona kumele ahambisane kuzisho umonakalo yezimpahla. Izimangalo ngoba ukushoda kanye izimpahla elahlekile kumele senziwe ngokubhala ukuba shipper ngaphakathi 3 izinsuku irisidi sokuhanjiswa. Izimangalo angabikwa ngaphakathi lo uhlaka isikhathi ngeke ahlonishwe.
Lesi siqiniseko asisebenzi futhi thina ngeke onesibophezelo sanoma yikuphi isici noma ukulimala:
a) umkhiqizo uma ngabe kabi, inganakiwe engafanele ifakiwe, ngokwenyama ezilimele noma kushintshwe, noma
ngaphakathi noma ngaphandle, noma ilimele kusukela ukusetshenziswa okungafanele noma ukusetshenziswa endaweni lungafanelekile; ukwephulwa izixwayiso kuleli bhukwana ngeke engavumelekile ukuthi isiqinisekiso singasebenzi.
b) umkhiqizo uma ngabe ushiswe, amanzi, ukugqwala generalized, kucabanga yemvelo, noma voltage okokufaka ukuthi kudala izimo zokusebenza ngalé kwemingcele esiphezulu noma ubuncane ezisohlwini umkhiqizo Ukucaciswa kuhlanganise high voltage wokufaka kusukela ugesi nombani iziteleka;
c) umkhiqizo uma elungisa lentiwe kuso ngaphandle inkampani yethu noma egunyaziwe Centres yayo yom-;
※ Amaphutha nokweqiwe agodliwe. S pecifications kuleli bhukwana kukhona isihloko ukushintsha ngaphandle ngaphambi isaziso.
Shenzhen Sigineer Amandla CO., LTD.
UCINGO: +86 755 2160 7078
Ifeksi: 755: +86 6165 8278
Engeza: Bld A, Jiali Industrial Zone, Yuanfen Rd, Longhua, Shenzhen, 518100, China
LONDOLOZA LELI BHUKWANA !
FUNDA LELI BHUKWANA NGAPHAMBI KOKUFAKWA, IQUKETHE EBALULEKILE UKUPHEPHA, UKUFAKWA KANYE NAMASISTIMU OKUSEBENZA IMIYALELO. YIGCINE ENDAWENI EPHEPHILE UKUZE ABHEKISELE KUYO ESIKHATHINI ESIZAYO .
SIFISELA WENA EJABULISAYO IN UKUSEBENZISA INVERTERS YETHU.
(PN: 614-01 66 6-04 / KUBUYEKEZIWE E JAN, 2015)